42% yeBrits vangafunga kuenda kuzororo kuSaudi Arabia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » 42% yeBrits vangafunga kuenda kuzororo kuSaudi Arabia
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • misangano • nhau • vanhu • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
Saudi Arabia yakaita mushandirapamwe wakabudirira wekushanya mudzimba muna 2020, uye nhamba dzevashanyi dzinotarisirwa kuenderera mberi nekutangazve kwekufamba kwenyika.
Indasitiri yekushanya yeSaudi Arabia iri kuramba ichikura yakagadzirira kudzoka munzira yekuzadzisa zvinangwa zvayo, sezvo vana mugumi Brits vanoti vaizofunga nezvezororo muumambo, inoratidza tsvakiridzo yakaburitswa nhasi (Muvhuro 10 Mbudzi) neWTM London.
Nzvimbo iyi ichaona kusimukira muzvirongwa zvayo svondo rino sezvo makambani akawanda ekufambisa achiti angangosaina zvibvumirano zvebhizimisi nemakambani eSaudi Arabia kuWTM London, uyo unotanga nhasi uchienderera mberi kusvika Chitatu 3 Mbudzi.
Maonero etarisiro anobva pane zvakawanikwa pasarudzo mbiri dzeWTM London, imwe yakaitwa pakati pevatengi vekuBritain uye imwe nenyanzvi dzekutengeserana dzekufamba nedzimwe nyika, dzinoumba WTM Indasitiri Report.
Sarudzo yevatengi zviuru makumi mana neshanu muzana yevakuru veku UK vangafunga kuenda kuzororo kuSaudi Arabia. Vamwe 1,000% vakati hazvingaite asi vanogona kunyengetedzwa.
Ongororo ye676 nyanzvi dzekutengeserana kubva kunyika dzepasirese dzakaona kuti inopfuura hafu (51%) vaironga kuita hurukuro dzebhizinesi nemabhizinesi eSaudi kuWTM London svondo rino.
Yakanga iri nzvimbo inonyanya kutaurwa, pamberi peItari munzvimbo yechipiri (48%) neGreece (38%).
Vakapindura vezvekutengeserana vakatiwo vangangosaina zvibvumirano nemakambani kubva kuSaudi Arabia, nenyika yakawana 3.9 kubva pavashanu - zvakare, mukana wepamusoro muvhoti.
Uyezve, makumi mana muzana evakabvunzwa vakati vangangodaro (40% zvakanyanya mukana; 30% mukana) kubvumirana chibvumirano neSaudi Arabia/Saudi Arabia masangano kuWTM London.
Humambo hwanga huchiwedzera basa rahwo rekutengesa muna 2021 mushure mekuvharika kwa2020.
Gore ra2019 risati rasvika, mavhiza ekushanya muSaudi Arabia aingotenderwa vafambi vebhizinesi, vashandi vekunze uye vafambi vaishanyira maguta eMecca neMedina.
Nyika yakavhura miganhu yayo kune vashanyi vekunze nekuvhurwa kwechirongwa chee-visa munaGunyana 2019.
Musi waNyamavhuvhu 1, 2021, Saudi Arabia yakatambira vashanyi vadzoka mwedzi gumi nemisere mushure mekumiswa kwekushanya nekuda kwedenda reCovid-18.
Yakaisa chinangwa chekuda chevashanyi vanosvika miriyoni zana panosvika gore ra100, sechikamu chekuyedza kusiyanisa hupfumi hwayo kupfuura mafuta efossil.
Zvakare nekuve kumusha kuMecca neMedina, maguta maviri matsvene echiIslam, nyika iri kugadzira "giga-mapurojekiti" ekuvandudza nhaka yehumambo, tsika uye zviwanikwa zvechisikigo pamwe nemapaki emusoro nenzvimbo dzeumbozha dzekutandarira.
Vashandisi vakaita saOngorora ikozvino vanopa nzendo dzakaperekedzwa munyika uye chikamu chayo chekufamba nechikepe chiri kusimukira zvakare - MSC Cruises neEmerald Cruises vanoronga kushandisa nzira dzine Saudi Arabia mumwedzi iri kuuya.
Uye guta reSaudi Arabia reAlUla rakatanga nzvimbo yekutengeserana yekufamba uye chikuva chekudzidzisa pamhepo kubatsira kuvaka ruzivo rwekuenda pakati pevamiriri veku UK.
Fahd Hamidaddin, Chief Executive weSaudi Tourism Authority akataura nevashandi veindasitiri yekushanya paATM 2021 - chiitiko chehanzvadzi yeWTM London.
Akataura kuti Saudi Arabia yakaita mushandirapamwe wakabudirira wekushanya mudzimba muna 2020, uye nhamba dzevashanyi dzinotarisirwa kuenderera mberi nekutangazve kwekufamba kwenyika.
Zvakare nekuvandudza zvitupa zvekushanya, humambo huri kuisa mari mumitambo yepasirese yemitambo kusimudza chimiro chayo.
Muna 2019, yakatambira Anthony Joshua's world heavyweight title kurwa uye ichatanga mujaho wayo wekutanga weGrand Prix mwedzi unouya (Zvita 2021) muguta reJeddah.
Simon Press, WTM London Exhibition Director, akati: "Zvichanyanya kukurudzira kuti nhumwa dzeSaudi kuWTM London dziverenge zvakanaka zvakawanikwa kubva kune yedu vatengi nevekufamba vatengesi vesarudzo. Vese vari vaviri vanoratidza kuti kudyara kukuru mukushanya kwave kutobhadhara, uye zvibvumirano zvichaitwa kuWTM London zvichabatsira kwainoenda munzira yekuzadzisa zvinangwa zvayo.